Sanduuqa noodle ee Shiinaha Soo-saar iyo Warshad | JAHOO
Waraaqda la tuuro ka qaado sanduuqa noodle ee leh cabirka Model Model (cm) Xidhmada Top Bottom High Pcs / Bags / ctn Pcs / ctn 16oz 8.1 × 7.3 7.7 9.8 50 10 500 26oz 9.8 × 8.5 9.5 9.3 50 10 500 32oz 10.2 × 8.9 9.5 11.5 50 10 500 Cabirka Qaabka (cm) Xidhmada Gunta Sare ...
Xaashida la tuuro ka qaado sanduuqa baastada leh gacanta
Model Cabirka (cm) Xirmo
Sare Hoose Sare Kumbiyuutarro / bac Dambiisha / ctn Kumbiyuutarada / ctn
Cunnooyinka tirada badan waxay u baahan yihiin xirmo adag oo dufan leh oo aan daadin karin ama jeexin.
Sanduuqyadeenna cuntada ayaa ka gudbaya imtixaanka maaddaama hawlwadeennada ay u adeegaan cunnooyin waaweyn oo lagu raaxeysto marka loo fiirsho qoyska,xafladaha xafiiska ama cashada guriga.
Qabashada iyo cunnada u oggolow macaamilka inuu doorto cunno caadi ah isagoo aan sugin inta la diyaarinayo.
Sanduuqa cunnada degdega ah waa weel gacmeed leh oo leh furitaan ballaaran oo bixiya aragti ku filan si fudud isla markaana si dhakhso leh loo ogaado cuntooyinka kala duwan.
Khadadka alaabtan ayaa ah xalka ganacsiga weyn ee loogu talagalay goobaha loogu talagalay macaamiisha socodka.
Waxaan ku faanaa inaan la tashano macaamiisheenna dib u eegista shuruudaha guud ee baakadaha iyo soo bandhigida hagaajin yareyneysa qiimahaaga guud ahaan baakadaha.
Waxaan si joogto ah dib ugu eegeynaa fikradaha baakadaha cusub iyo kuwa hal-abuurka leh macaamiisheenna si aan u go'aamino waa maxay habka ugu qaalisan uguna waxtarka badan ee loo xirxiro badeecadooda.
Laga soo bilaabo waraaqaha cuntada ee xayrta dufan ilaa bacaha daabacan iyo duubab, xalalkayaga gaarka ah ee loo qoondeeyay waxay buuxinayaan shuruudaha ugu badan ee baakadaha cuntada.
Waxaan bixinnaa qaabab kala duwan oo la heli karo, oo ay ku jiraan caabbinta biyaha, caabbinta dufanka, tayada kululaynta, iyo guryaha xoogga u fiican.
Hore: sanduuqa qadada
Xiga: bacda warqadda